vendredi, 28 juin 2019 22:47
Tabera Randriamanantsoa: “Tokony hisy fisaonam-pirenena”
Naneho ny heviny manoloana ny loza nitranga teo Mahamasina ny harivan’ny 26 jona 2019, nankalazana ny fetim-pirenena, ka namoizana ain’olona 16 sy naharatra olona zato teo ho eo, ny filoha nasionalin’ny antoko Kintana, sady mpandritra ny CRN, Tabera Randriamanantsoa. Milaza ity farany fa tokony hisy ny fisaonam-pirenena satria maro loatra ny aina nafoy.
vendredi, 28 juin 2019 22:40
Fifidianana Ben’ny tanàna sy Mpanolontsaina: Fifidianana roa samihafa fa tontosaina miaraka
“Fifidianana roa samihafa ireo fifidianana Ben’ny Tanàna sy Mpanolontsainan’ny Tanàna, hotanterahana amin’ny alatsinainy 28 ôktôbra 2019, ary samy hanana ny vata mangaraharany sy hanana ny fombafombam-pifidianany azy avy, araka ny nambaran-dRakotonarivo Thierry, Filoha lefitry ny CENI omaly alakamisy 27 jona.
Ho an’ny fifidianana Ben’ny Tanàna dia ny “suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour” na ny fifidianana andraisan’ny rehetra anjara mivantana, indray mihodina, fifidianana olon-tokana ary handresen’izay hahazo vato betsaka indrindra.
Ho an’ny fifidianana mpanolo-tsaina kosa indray, izay andraisan’ny rehetra anjara mivantana ihany koa dia ny « scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du quotient électoral et la règle du plus fort reste ».
vendredi, 28 juin 2019 22:10
Andrapengy- Antalaha: Vehivavy iray avy namonjy « bal » maty novonoin’ny andian-jatovo tsy ampy taona
Avy namonjy alimpandihizana ny alin’ny 25 hifoha ny 26 jona tao amin’ny Fokontany Andrapengy, Kaominina Ampahana, Distrika Antalaha, Faritra SAVA, ity renim-pianakaviana fantatra amin’ny anarana Juliette ity, no nisy namono, raha iny hamonjy fodiana iny.
Ny fitsirihana nataon’ny mpitandro filaminana sy ny mpitsabo no nahafantarana fa maty nisy namono i Juliette, ary namela kamboty 5 mianadahy.
Omaly ihany dia efa nisy ny voasambotra tamin’ity vono olona ity, ka ankizy tsy ampy taona, 17 sy 16 taona ny roa tamin’ireo voarohirohy. Nitsoaka any amin’ny Distrikan’i Sambava ny roa hafa naman’izy ireo, ary efa mandeha ny fikarohana amin’izao.
vendredi, 28 juin 2019 22:06
Sambava: Lehilahy iray maty tampoka nentanin-kafaliana tamin’ny fandresen’ny Barea
Noho ny haravoana loatra tamin’ny fandresena azon’ny ekipam-pirenena malagasy amin’ny baolina kitra na Barea nanoloana ny « Hirondelles » an’i Burundi, omaly hariva, dia nanao krizy fihentanam-po tampoka ny raim-pianakiavana iray, raha vao vantany tonga an-trano avy nijery baolina tamin’ny « écran géant » tetsy Sambava Centre, ka namonjy fodiana tao Ambodisatrana, eo amin ny 1km eo raha lavitra indrindra.
Tsy tana intsony ny ainy ka maty tamin’ny 11 ora alina teo. Namela kamboty telo mianadahy ratompokolahy.
vendredi, 28 juin 2019 22:05
Fifidianana Depiote: Hivoaka ny talata 2 jolay ny vokatra ofisialy
Araka ny fampitam-baovao nataon'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ao amin'ny tranokalany androany dia hatao ao amin'ny foiben-toerany ao Ambohidahy-Antananarivo amin'ny talata 2 jolay, amin'ny 4 ora tolakandro ny lanonana ara-pitsarana hamoahana ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana solombavambahoaka notontosaina tamin'ny 27 mey 2019 nanerana ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara.
vendredi, 28 juin 2019 21:55
Kitra-CAN 2019: Miantona ny fitantarana baolina ao amin'ny RNM
Nanao fanambarana ny ORTM, androany, mampahafantatra ny besinimaro fa misy orinasa iray milaza ho hany tokana nahazo ny alalana tany amin'ny CAF amin'ny fitantarana mivantana ny lalaon'ny CAN amin'ny onjampeo, ka nandrarany ny RNM tsy ho afaka manao izany fitantarana mivantana izany.
Manoloana izany dia naka ny hevitry ny CAF ny RNM satria ny CAF no nanao sonia fifanarahana taminy, ka mandra-piandry ny valinteny avy any dia miantona aloha ny fitantarana mivantana ireo lalaon'ny CAN ao amin'ny Radio Nasionaly Malagasy (RNM).
vendredi, 28 juin 2019 09:14
Ambatofinandrahana: Vinavinaina hiverina amin’ny laoniny anio ny famatsiana herinaratra
Tapaka nanomboka omaly alakamisy 27 jona 2019 tamin’ny 07ora maraina ny jiro aty an-tampontananan’Ambatofinandrahana sy ireo faritra manodidina azy akaiky.
Fahasimban’ireo milina lehibe mpamokatra herinaratra ao amin’ny toby famokarana no voalazan’ny Jirama fa nitarika io fahatapahan-jiro io.
Amperiny tanteraka amin’ny asa fanarenana ny simba ny ekipa teknikan'ny Jirama amin'izao fotoana izao, ka vinavinaina hiverina amin’ny laoniny amin’ity antoandron’ny zoma 28 Jona 2019 ity ny famatsiana herinaratra.
Nisitraka izany ny teny amin’ny fokontanin’i Mahazoarivo ny 25 jona 2019 teo, ho fanamarihana ny fankalazana ny faha-59 taona niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara.
Nisolo tena ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta, Ntsay Christian, nitarika ny fizarana ny Sekretera Jeneralin’ny governemanta, Razanadrainiarison Rondro Lucette, notronin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny teo amin’ny Primatiora.